यी डकुमेन्ट लिएर जानुुस्, सस्तो डाउन पेमेन्टमा सजिलै किन्न पाइन्छ बाइक – ramechhapkhabar.com
यी डकुमेन्ट लिएर जानुुस्, सस्तो डाउन पेमेन्टमा सजिलै किन्न पाइन्छ बाइक
काठमाडौं, २२ असोज ।
कोरोना भाइरसका कारण भएको देशव्यापी लकडाउनपछि सुस्ताएको अटो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन अटो कम्पनीहरूले विभिन्न स्किम निकाल्न थाले । सस्तो डाउन पेमेन्टदेखि आकर्षक छुटसम्मका अफर ल्याएर ग्राहकलाई कम्पनीहरूले लोभ्याए ।
यतिबेला नेपाली अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा दसैं तथा तिहार अफर चलिरहेको छ । कम्पनीहरूले सस्तो डाउन पेमेन्ट सुविधा, क्यास छुट, स्क्र्याच कार्डमार्फत छुट, र केही कम्पनीले हरेक साता भाग्यशाली विजेता छनोट गरी बाइक उपहार पनि दिइरहेका छन् ।
खासगरी अटो कम्पनीहरूले सस्तोदरमा डाउन पेमेन्ट सुविधामै केन्द्रित छन् । तर, कारोना भाइरसको कारण प्रायः मानिस रोजगारी गुमेको अवस्थामा भनेजति पैसा छैन । जसका कारण पनि सर्वसाधारण डाउन पेमेन्टमै सवारीसाधन किन्न खोज्ने गरेका छन् । बाइक सोरुममा डाउन पेमेन्टमै मोटरसाइकल खरिद गर्नेको भीड लाग्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय बाइक कम्पनीहरू होन्डा, बजाज, टीभीएस, यामाहा, अप्रिलिया लगायतका ब्रान्डका बाइक खरिदमा २० प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट सुविधा ल्याएका छन् ।
२० अथवा ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा बाइक खरिद गर्दा छुट पाइँदैन भने ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा बाइक किन्दा शून्य प्रतिशत ब्याजदरमै कम्पनीहरूले सवारीसाधन उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
कतिपय मानिसहरूले फाइनान्स सुविधा झन्झटिलो हुने बताउँदै आएका छन् । तर, पैसा नभएका अवस्थामा बाइक चढ्नका लागि यो आकर्षक मौका हो । खासगरी डाउन पेमेन्टमा बाइक चढ्ने भने पनि सर्वसाधारण डकुुमेन्ट र मासिक तिर्नुपर्ने किस्तामा अलमलिने गरेका छन् । आज डाउन पेमेन्टमा बाइक किन्दा के–के कागजात चाहिन्छ र कति तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने छौं ।
के–के चाहिन्छ कागजात ?
यदि तपाईंले सस्तो डाउन पेमेन्टमा बाइक खरिद गर्न लाग्नुभएको छ भने सुरुमा आफ्नो आयस्रोतका आधारमा मोटरसाइकल छान्नुहोस् । जसका लागि २० देखि ३० हजार मासिक पारिश्रमिक छ भने जुनसुकै कम्पनीका १ सय ५० वा ६० सीसीका बाइक रोज्न सक्नुहुन्छ । यदि ३० देखि ५० हजार माथि मासिक पारिश्रमिक छ भने २०० देखि २५० सेग्मेन्टसम्मका बाइक तपाईंले किन्न सक्नुहुनेछ ।
कम्पनीहरूले पनि सोहीअनुसार नै बाइक र किस्ताको वर्गीकरण गरेका हुन्छन् । त्यसका लागि सुरुमा आयस्रोत खुल्ने प्रमाण अथवा कागजात नै हो । फाइनान्सिङमा बाइक चढ्ने हो भने मासिक कमाई खुल्ने कागजपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ । जसका लागि ६ महिनाको बैंक स्टेटमेन्ट र कार्यरत कार्यालयबाट पारिश्रमिक खुल्ने गरी कागजात चाहिन्छ ।
त्यसैगरी तपाईंको नागरिकताको फोटोकपी, लाइसेन्सको फोटोकपी, २ प्रति फोटो, घरको लालपुर्जाको फोटोकपीसहित एक जना जमानिकर्ता चाहिन्छ । त्यसपछि मात्रै बाइक किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
प्रायः अटो कम्पनीहरूले आफ्नै क्षेत्राधिकारका फाइनान्सबाट फाइनान्सिङको सुविधिा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । त्यस्तै आफूले चाहेको फाइनान्सबाट पनि किस्ता सेवा लिन सकिन्छ ।
प्रायजसो जुनसुकै कम्पनीले २२ देखि २४ महिनासको समय अवधिमा बाइक किस्ता सुविधा दिएका हुन्छन् बाइकको किस्ता तिरिनसकेसम्म उक्त फाइनान्सकै नाममा तपाईंको बाइक रहिरहन्छ ।
उक्त किस्ता पूर्णरूपमा बुझाइसकेपछि मात्रै बाइक तपाईंको नाममा आउँछ । तपाईंले कुन बाइक लिने हो सोही अनुसार नै मासिक किस्ता कति तिर्नुपर्छ भन्ने तय हुन्छ ।
यदि तपाईंले २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा बाइक लिने हो भने १५० सीसी क्षमताका बाइकको मासिक १० देखि १२ हजारसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ भने २०० सेग्मेन्टका बाइक खरिद गर्दा १२ हजारदेखि १४ हजारसम्म पर्न आउँछ ।
रस्मिला थपलिया कोरोनाको पहिलो लहर सकिन नपाउँदै नेपालमा फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर आइएसकेको छ।...
मलेसियामा ड्युटीमा खटिएका निर्मल कसरि परे जेलमा ? यस्तो रहेछ कारण !
क्वालालम्पुर, ४ असोज । मलेसियामा मेचिनगर-३ झापाका निर्मल पोख्रेल सम्पर्क बिहिन भएको खबर सार्बजनिक...
मलेशियामा ईलि’गल हुनुहुन्छ ? कसरी घर फर्कने ? के के चाहिन्छ कागजात?
मलेसियाले कामदार भर्ना लिने, कस्ता कामदारले प्रवेस पाउछन ? जान्नुहोस
मलेसियामा स्वाभिमान लूटिरहनेलाई हामीले सम्मान गरिरहनुपर्ने?
हार्दिक श्रद्धाञ्जली !! बेहोस भएर ढलेपछि कोरियामा अस्ताए २८ वर्षीय सुजन घले !
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन्। शुक्रबार...
चीनमा शक्तिशाली भूकम्प : ३ जनाको मृत्यु, ६० जना घाइते थप विवरण आउन बाकि
न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री एडर्नलाई कसले पठायो शंकास्पद वस्तु ?
मलेसियामा हुने नेपाली श्रमिकहरुको लागि दुखद् खबर